Ogaden News Agency (ONA) – Munaasabad lagu xusayay African Day oo murugo ku dhamaatay
Munaasabad lagu xusayay African Day oo murugo ku dhamaatay
Waxaa shir balaadhan oo si fiican loo soo agaasimay lagu qabtay magaalada Uitenhage ee gobalka Easten Cape xaafada Laanga. Shirka oo lagu xusayay maalinta loogu magacdaray maalintii Afrika oo ku beegnayd 25kii May 2011 ayaa waxaa lagu casuumay xubno matalayay jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Koonfur Afrika. Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa hadal ku lahayd jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Konfur Africa halkaasoo uu khudbad dheer ka soo jeediyay munaasabada afhayeenka jaliyada S/Ogadenia u qaabilsan xaga dawlada mr Kalaani. Waxaa kaloo ay jaaliyadu soo bandhigtay tacadiyada ay waxmahaysatada gumaysiga itoobiya ku hayso shacabka S/Ogadenia. Waxaa kamid ahaa arimaha lagu daawaday halkaa filimkii Silent Cry oo xaqiiqdii dadkii meesha isugu yimid gaal iyo islaam kaga oohisay. Munaasabada oo markii hore ku socotay si dabaaldag ah ayaa markii magarafoonka lagusoo dhaweeyay jaaliyada S/Ogadenya ayay waxay munaasabadii isu badashay xaalad murugo iyo oohin dadkii qofba dhinac ula jeedsaday.
Mr kalaane ayaa isaga oo khudbada akhrinaya u yeedhay Xaashi Dhicis oo kamid ahaa jaaliyadda S/Ogadenia ee kunool koonfur Africa ahna dadka ay dhibaatada u gaysatay gumaysiga Itoobiy. Xaashi ayaa soo istaagay dadka hortiisa oo ka sheekeeyay dhibaatada ay u gaysteen ciidamada gumaysiga itoobiya. Dadka Koonfur Afrika oo ah dad soo maray gumaysi ku raagay ayaa hadalkii xaashi ay dhamaantood kaga ilmaysiisay.
Munaasabadan oo ay qabatay dawlada Koonfur Africa ayaa waxaa kasoo qayb galay dad boqolaal ah oo u dhashay wadankan Koonfur Africa oo ay ku nool yihiin hadda qoxooti aad u tiro badan oo kasoo kala jeeda qoomiyado ama dalal kala duwan oo Afrika ah. Waxaa munaasabada kasoo qaybgalay marka laga reebo xubnaha dawlada Koonfur Africa iyo shacabkeeda, jaliyada Somalida Ogadenia iyo dad tiro yar oo ka soo jeeday wadanka Ghana halka sanadkii hore ay kasoo qabgaleen qowmiyado kala duwan.
Munaasabadan ayaa ku dhamaatay murugo. Afhayeen u hadalay booliska laguna magacaabo Vena ayaa yidhi; “.. waanu ka warheyna xalda ay ku sugan tahay Ogadeniya waxayna nagu haysaa xanuun badan”.
Gabadh ka socotay baarlamaanka wadanka ayaa ayaduna ka hadashay xaalda Ogadeniya oo tidhi; “.. ma moodaynini wadan African ah oo dhibaatadani ka jirto inuu jiro”. Hadii loo bahan yahay Afrikan waxa wada qabsada ayey dhahaday waa in hogamiye-yaasha macangaga ah lala xisaabtamaa mid walbana lasoo bandhigaa wuxu gaystay.
Ergay kasocoday xafiiska xisbiga talada haya ee ANC ayaa asaguna yidhi; “.. dadka reer Ogadeniya ma’aha geedo baxay oo la gurayo, waa dad banii-aadam ah”. Waa lala xisaabtami Zinawi ayuu yidhi dadka laleenayo yuuna meel u waayin.
Gabdh ka socotahy wasaarada Arimaha Dibada laguna magacaabo Thandi ayaa dhahaday
Itoobiya waxaanu ka warhayna dhibka wadankanaga ka jira inay qeeb ka tahay, sida dilka iyo dhaca lagula kaco dadka qaxootiga ah ee ka soo qaxay Itoobiya. Uma ogolaan doono ayey dhahaday safiirku inuu hawlahaasa sii wato.
Shirka ayaa guud ahaanba ku dhamaaday maanta murugo iyadoo markii shirka laga baxay uu xafiiska JOKA soo buxu dhaafiyey saxaafada wadanka kalana waayey meel ay waxa ka kala duubtaan. Waxaa xafiiska soo xaadiray in kabadan 50suxufi.